Betsileo - Wikipedia
Ny Betsileo dia vondrom-poko lehibe eto Madagasikara, ao amin' ny toerana faritan' ny ony Mania ao avaratra, ny tanin' ny Tanala ao atsinanana, ny tendrombohitr' Andringitra ao atsimo, ary ny tandavan-tendrombohitr' i Bongolava ao andrefana, izany hoe ao amin' ny Faritanin' i Fianarantsoa. Ireto ny tanàna lehibe ao amin' ny tanin' ny Betsileo: Ambositra, Ambohimahazo, Ambohinamboarina, Fianarantsoa, Ambohimahasoa ary Ambalavao.
Ny fanjakana betsileo samihafa (Fandriana, Fisakana, Manandriana, Isandra, sns) dia tsy nifampiankina, ary nanana ny lovantsofina am-bavany nanomboka tamin' ny taonjato faha-17. Resin-dRadama I avokoa izy ireo tamin' ny farany ary naverin-dRadama I nalamina. Ny ampahany betsaka amin' ny Betsileo dia natao andevo ary namidy tao an-toerana na namidy tamin' ireo Eorôpeana mpivarotra andevo. Radama I no nanao an' i Fianarantsoa ho renivohitry ny Betsileo Afovoany sy ny Betsileo Atsimo. Ny Betsileo Avaratra dia nakambana tamin' Antsirabe. Noho izany, ny Betsileo amin' ny maha-vondrom-poko azy dia nanomboka tamin' ny taonjato faha-19 ho fizarazarana ara-pitantanan' ny governemanta malagasy.
1 Ny tanin' ny Betsileo
2.1 Ny anarany
2.2 Fifindrà-monina tao amin' ny tanin' ny Betsileo
2.3 Ireo fanjakana betsileo
3.1 Ny sarangam-piarahamonina faha-mpanjaka
4.2 Ny savika
4.3 Ny ombiasy
Ny tanin' ny BetsileoHanova
Ny Betsileo dia monina ao amin' ny tapany atsimo amin' ny lembalemban' i Madagasikara. Ny faritanin' izy ireo dia manomboka ao avaratry ny reniranon' i Mania any avaratra ka hatrany am-pototry ny tangorom-bohitra Andringitra any atsimo; miankandrefana ny tandavan-tendrombohitra Bongolava ary ny atsinanana dia ny ala atsinanana, izay nonenan' ny foko Tanala. Ny ankamaroan' ny faritr' i Betsileo dia ao anatin' ny sisin-tanin' ny Faritanin' i Fianarantsoa, izay ahitana ny renivohitra mitovy anarana.
Raha ny mahazatra dia mizara telo lehibe ny faritanin' ny Betsileo sy ny vahoakany. Ny Betsileo Avaratra (na Fisakàna) dia faritana amin' ny reniranon' Ivato sy Manandona any avaratra ary ny reniranon' i Sahanivotry sy Mania any atsimo. Ny Betsileo Afovoany (na Manandriana) dia hita eo anelanelan' Ivato sy ny reniranon' i Matsiatra. Ny Betsileo Atsimo dia ny Betsileo ao atsimon' ny renirano Matsiatra (Isandra, Lalangina, Iarindrano ary Andringitra).
Hatrany am-piandohan' ny taonjato faha-18, dia nivonona amin' ny fitaovam-piadiany ny Betsileo mba hiaro tena amin' ny famelezan' ny Sakalava, ka namorona ny tafika maharitra voalohany teto Madagasikara.
Nambaran' i Grandidier fa ny anaran' ny Betsileo dia Andriambohitsombilahy, izay matetika tsorina amin' ny hoe Ambohitsomby. Niantso ny tenan' izy ireo hoe Betsileo izy ireo, izay midika hoe "tsy azo resena", taorian' ny ezaka tsy nahomby nataon-dRamitraha, mpanjakan' ny Sakalava tao amin' ny Fanjakan' i Menabe, tamin' ny taona 1815 mba handresena ny Betsileo.
Ny adin' ireo mpiavy vao tonga tamin' ny Vazimba, mponina tranainy indrindra eto amin' ny Nosy, tao amin' ny tanin' ny Betsileo, dia tamin' ny taonjato faha-13. Ny Eorôpeana mpikaroka tany vaovao Souchu de Rennefort sy François Martin dia efa nahafantatra ny anarana hoe "Betsilao" tamin' ny taonjato faha-17, ka izany anarana izany dia mety ho nampiasain' ny Vazimba mba hanondroany ny mpanani-bohitra, ary tamin' ny farany dia noraisin' ny Betsileo taorian' ny fahombiazana tamin' ny fanafihana tsy nahomby nataon' ny Sakalava avy ao tamin' ny fanombohan' ny taonjato faha-18.
Fifindrà-monina tao amin' ny tanin' ny BetsileoHanova
Ny fifindra-monin' ny vahoaka nandray ampahany amin' ny kolontsaina arabo (Iarivo) tany atsimo-atsinanan' ny tanin' ny Betsileo tamin' ny taona 1475 dia namarana tanteraka ny andron' ny Vazimba izay nifindra monina niankandrefana. Iarivo, izay tao amin' ny faritra Lalangina (aty aoriana), dia tanin' ny razan-dRalambovitaony, izay nanorina ny Fanjakan' Isandra, izay ivon' ny tontolo betsileo tamin' ny taonjato faha-18 teo afovoan' ireo fanapahan' andriana notarihan' ny tarana-dRavelonandro, izay andriambavy avy amin' ny tanin' ny Antemoro.
Ao amin' ny Monographie Betsileo, nohamafisin' i mompera Dubois fa ireo andriana mpifindra monina dia niray hina tamin' ny andriana vazimba, ary nandroaka ny mponina tompontany sisa nankany andrefana. Araka izany dia mety nisy ny fifanambadiana teo amin’ ireo andriana mpiavy sy ireo andriana vazimba, ka namorona ny foko betsileo amin' izao fotoana izao izay ahitana ireo andriana manana toetra afrikana, raha oharina amin' ny mponina sisa. Ny Vazimba dia namela ho lovan' ny Fanjakan' Iarivo sy lovan' ny Fanjakan' Isandra (tamin' ny alalan' ny Fanjakan' Iarivo), ny andriamaniny na ny razambeny izay lasan-ko andriamanitra sy ny fanaony ara-pôlitika sy ara-pivavahana rehetra. Marina izany teo amin' ny fombafomba isan-karazany momba ny fivavahana amin' ny razana, momba ny fikarakarana sy ny hoavin' ny fatin' ny mpanjaka amin' ny fahatongavany ho "fañany" indray ao amin' ny vatana, ary koa ny amin' ireo fombafomba fanorenana izay nitaky sorona olombelona. Ny fandraisan' ny andriana vazimba anjara tao amin' ny fanjakà-mpanjaka manaraka izany dia zava-dehibe.
Ireo fanjakana betsileoHanova
Araka ny lovantsofina, ny mpanapaka ny fanjakana betsileo samihafa dia avy amin' ny rohim-pirazanana iray ihany, dia ny mpanjakan' i Manandriana, ny fanjakana avaratra tao amin' ny faritr' Ambositra ankehitriny. Io Fanjakan' i Manandriana io dia niforona tamin' ny taonjato faha-16 ary nanana ny mpanjaka lehibe voalohany atao hoe Andrianantara I. Ny fanjakana hafa izay nipoitra taty aoriana ary tsy nisy nifampiankina dia:
ny Fanjakan' i Fisakàna ao avaratra, naorin-dRatrimo, zanak' Andriamitanosy sy ny mpanjaka antemoro avy amin' ny Anteony, fanjakana nanana ny mpanjaka farany Rivoekembahoaka II, mandra-pifehezan' ny Merina azy tamin' ny taona 1808 tamin' ny alalan' Andrianampoinimerina;
ny Fanjakan' Ambositra ao atsimo-andrefan' i Fisakàna sy atsinanan' ny Fanjakan' i Manandriana, izay naorin' i Mpanalina, zanaka faharoan' Andriamitanosy;
ny Fanjakan' Isandra tao atsimo-andrefana, izay nahatratra ny tampon' ny lazany tamin' ny tapany faharoan' ny taonjato faha-18 teo ambany fanapahan' Andriamanalina I;
ny Fanjakan' i Lalangina naorin' ny mpanjaka Rahasamanarivo, any amin' ny faritra atsimo-atsinana amin' i Fianarantsoa ankehitriny, izay nomena anarana tamin' ny andron' ny fandresen' ny Merina notarihin-dRadama I;
ny Fanjakan' i Arindrano any atsimo (faritra Ambalavao ankehitriny) izay nizara roa avy eo ka namorona ny Fanjakan' i Vohibato any amin' ny farany atsimo.
Hita amin' ny tantaran' izy ireo fa tao anatin' ny taonjato farany dia nitombo hatrany ny vahoaka betsileo, voalohany nianatsimo sy nianandrefana, ary avy eo nianavaratra tao amin' ny tanin' ny Merina izay misolo tena ireo vitsy an' isa tsy azo tsinontsinoavina ankehitriny. Ny Betsileo no vondrom-poko fahatelo lehibe indrindra eto Madagasikara.
Ny Betsileo dia mifandray akaiky amin' ny kolontsaina merina, satria izy ireo dia vondron'olona monina any amin'ny faritra avo. Ny fiarahamonina betsileo dia voafaritra amin'ny alalan'ny rafi-piaraha-monina tena saro-drafitra. Misy ifandraisany akaiky eo amin’ny fianakaviana manenika ny fiaraha-monina amin’ny ambaratongam-pitantanana sy ny asa, satria ny ankamaroan’ny Betsileo dia tsy maintsy miditra amin’ny havany eo amin’ny sehatry ny fianakaviana. Tena manantitrantitra koa ny andraikitry ny loholona amin’ny maha-mpitarika fiaraha-monina azy. Matetika ny loholona ao amin'ny vondrom-piarahamonina no mitana fahefana bebe kokoa noho ny an'ireo manana andraikitra ara-panjakana.
Ny sarangam-piarahamonina faha-mpanjakaHanova
Nizara efatra ny ambaratongam-piarahamonin' ny Betsileo faha-mpanjaka:
Ny Hova (andriana): tarana-mpanjaka, izay tompon' ny omby sy ny tany rehetra. Ny fividianana na famonoana omby dia tsy maintsy atrehin' ny Hova. Tsy misy intsony ankehitriny ny famonoana omby an-jatony izay nankalazana ny fahafatesan' ny mpanjaka na ny mpanankarena betsileo, satria nifarana taorian' ny fandrarana azy ireo nandritra ny fanjanahan-tany frantsay teto Madagasikara.
Ny Andevohova: andevo noheverina ho olona afaka, satria nandray soa avy amin' ny satan' ny maha mpanompon' ny Hova. Ny tanan-kavanan' ny Hova dia ny Andriambaventy. Ny mpitaiza ny zanaky ny Hova, atao hoe Raindraoto sy Ramanga, dia nisotro ny ran' ny Hova maratra, nanangona ny hohony, nanapaka ny henany, sns.
Ny Olom-potsy: sarangam-piarahamonina Betsileo, izay mampiavaka ny sarangan' ny olon-tsotra, tsy misy manavaka azy. Voalaza fa misy fokon' Olom-potsy miisa 78 ny Betsileo. Ny maha isan' ny foko iray dia mifindra amin' ny alalan' ny fianahana ary mamaritra ny lalàn' ny fanambadiana izay tsy azo atao afa-tsy eo amin' ny fianakaviana iray foko ihany. Ny foko tsirairay dia samy manana ny fadiny, sady manana ny fitsipika mifehy azy.
Ny Andevo: olona resy tamin’ ny ady. Eo am-pelan-tanan' ny tompony tanteraka ny andevo saingy tsy nisy habibiana natao taminy fa tao an-trano izy, ary navela niaraka tamin' ny vady aman-janany.
Ny Sihanaka any avaratra sy ny Merina ao afovoan-tany dia nanana karazana ambaratonga ara-tsôsialy mitovy amin' ny an' ny Betsileo. Na izany aza, mbola lehibe ny tsy fitoviana ary ny olona ao amin' ny vondrona samihafa dia mbola mazoto hanamarika ny maha-izy azy avy amin' izany sy amin' ny sehatra hafa.
Ny fahatongavan' ny misiônera eorôpeanina tamin' ny taonjato faha-19 dia nahatonga Malagasy maro hiova fo ho amin' ny kristianisma. Ny 94 % eo ho eo amin’ny Betsileo dia Kristianina. Prôtestanta na Katôlika ankehitriny ny ankamaroan' ny Betsileo, saingy mbola tandremana hatrany ny ankamaroan' ny fomban-drazana sy ny foto-pivavahan' ny razambeny, matetika miaraka na mifanaraka amin' ny fanao kristianina.
Fasana betsileo misy teza eo amboniny
Ny Betsileo talohan' ny kristianisma dia nino ny fisian' ny andriamanitra mpamorona antsoina hoe Zanahary. Ny tontolon' ny fanahin' ny razana, ny matoatoa ary ny fanahin' ny zavaboary dia inoana ihany koa, ary mbola antsoina amin' ny alalan' ny fombafomba. Niteraka rafitra tsy manam-paharoa eo amin' ny fombam-pivavahana ny endrika mifanohitra eo amin' ny fivavahana eorôpeana mônôteista sy ny fivavahan-drazana malagasy izay nampitambatra ny fomba amam-panao kristiana sy ny foto-kevitra nentin-drazana (sinkretisma).
Anisan' ny lanonana lehibe indrindra ao amin' ny Betsileo ny famadihana, ka amin' izany no hanalana ny taolambalon' ny razana betsileo, mba hofonosina lamba vaovao sy hankalazaina. Na eo aza ny fielezan' ny kristianisma dia mbola zava-dehibe ihany koa ny andraikitry ny ombiasy izay mpisikidy sy mpanandro ary mpanao ody eo amin' ny fiarahamonina betsileo. Misy fombafomba ara-pivavahana mitovy amin' izany ny Toraja, Sulawesi Atsimo ary Daiàka any Kalimantan ary koa any amin'ny toerana samihafa any Indônezia.
Ny Betsileo dia, tahaka ny ankamaroan'ny mponina eto Madagasikara, ny ankamaroany dia fifangaroan'ny taranaky ny Afrikana Banto sy ny avy any Azia Atsinanana, na dia misy aza ny loharano milaza fa ny Betsileo dia taranaka Aostrôneziana indrindra. Na izany aza, ny bika aman'endriny dia mitovy amin'ny vahoaka banto kokoa noho ny an'ny Aostrôneziana. Araka ny lovantsofina dia milaza ho manana lova iombonana amin'ny Antemoro sy ny Tanala avy any amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny Bara avy any atsimo izy ireo. Tao amin’ny trano bongo vita amin’ny tsiraka ahitra no nipetrahan’izy ireo, ka nanokana trano hazo ho an’ny andriana, araka ny fomban’ny maritrano malagasy. Matetika izy ireo no voaravaka haingon-trano na tandrok' omby. Amin'izao fotoana izao, ny trano biriky sy fotaka no mahazatra kokoa.
Noho ny lova navelan' ny sivilizasiona nentim-paharazana, ny Betsileo dia mpanao asa hazo tena mahay, fantatra indrindra amin' ny sary sokitra lehibe. Ny Zafimaniry manokana, zana-bondrona ao amin' ny Betsileo, no nitazona izany fomban-drazana izany ary heverina ho mpitahiry farany ny fahalalana nentin-drazana betsileo momba ny haitao hazo sy ny haingon-trano. Tamin' ny taona 2002 dia nosokajian' ny UNESCO ho lova ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana ho an' ny olombelona ny fahalalana ny hazon' ny Betsileo Zafimaniry.
Anisan' ny mampiavaka ny Betsileo ny fanatanjahantena ataon' ny tanora. Mba hitsapana ny tanjany, hanehoany ny herim-pony, ho hizarana ady na hisintomana ny vehivavy, ny tanora betsileo dia mifanandrina amin' ny omby alahatra araka ny hasiahany, amin' ny tanany mitondra na inona na inona eo amin' ny kianja feno olona mamo. Ity fanatanjahantena nentim'paharazana antsoina hoe savika, na toloñ' omby, dia iray amin' ireo lafiny maro mampiseho ny toeran' ny omby ao amin' ny sivilizasiona betsileo. Izy io dia tandindon' ny fahefana sy ny harena ary ny mpanjaka.
Ny ombiasy dia inoana fa afaka mibaiko ny hery miafina ary miresaka amin' ny razana, ary azo dinihina amin' ny antony manomboka amin' ny olana ara-pahasalamana ka hatramin' ny vorika ary ny fisikidiana, ny fambolena, sns. Ny ombiasy dia afaka manao ny tsara sy ny ratsy, ary izany no mampiavaka azy amin' ny mpamosavy izay manao ny ratsy ihany. Izy no manapa-kevitra momba ny andro tsara hanaovana lanonana toy ny famadihana, araka ny toerana misy ny kintana sy ny tetiadrom-bolana. Manaja azy fatratra ny mponina, satria mitana fahalalana izay tsy misy manana afa-tsy izy ihany ary mety hanimba raha toa ka mampiasa ody hamosaviany izy. Ny ombiasy dia manamboatra zavatra manana hery miafina toy ny moara na mohara.
Mitovitovy amin' ny fitenim-paritra any amin' ny faritra atsimon' i Madagasikara sy ny an' ny faritra avo afovoany ny fiteny betsileo.
Malaza amin' ny fiompiana omby sy ny fambolena ary ny fahaizan' ny mpamboly ny Betsileo. Mitana toerana lehibe eo amin' ny asa ara-toekarena ny fambolena vary, izay foto-tsakafo eto Madagasikara. Ny haben' ny tanimbary sy ny vokatra azo avy aminy ary koa ny isan' ny biby fiompy ananana no matetika no mamaritra ny haren' ny fianakaviana. Mampiavaka ny tanin' ny Betsileo ny havoana sy ny lohasaha izay misy tanimbary mifanao ambaratonga (misy farafaran-tany), amin' ny fomba mampahatsiahy ny any Azia Atsimo-Atsinanana, ka mampiseho ny lova navelan' ny razambeny sasany avy any amin' ity faritra any Azia ity.
Ny sakafon' ny Betsileo dia saika ahitana vary miaraka amin' ny hena avy amin' ny biby fiompy toy ny omby, ny akoho, ny ganagana, na ny trondro avy amin' ny fiompiana trondro na nojonoina amin' ny renirano, ary koa sakafo avy amin' ny voly fanampiny toy ny mangahazo, ny tsaramaso ary legioma hafa.
Denis Regnier, Les esclaves morts et leur invocation dans les rituels du Sud Betsileo, Études Océan Indien, n° 51-52, 2014, p. 253-276. https://oceanindien.revues.org/1682 [archive]
M. Sallé: Les Funérailles chez les Betsiléos, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Volume 8, 1907. p. 165-167. http://www.persee.fr/doc/bmsap_0037-8984_1907_num_8_1_6995 [archive]
Mariette Razivelo, The doctrine of the holy spirit in the Betsileo context : implications of the Betsileo understanding of "spirit", "human spirit" and "spirits" for the christian understanding of the holy spirit, Luther Seminary, Université de St. Paul (MN), 1994, 254 p.
Regnier, Denis (2012). Why not marry them? History, essentialism and the condition of slave descendants among the southern Betsileo. PhD thesis. London School of Economics and Political Science. http://etheses.lse.ac.uk/362/ [archive]
Regnier, Denis, Pourquoi ne pas les épouser? L'évitement du mariage avec les descendants d'esclaves dans le sud Betsileo (Madagascar), Etudes rurales, n°194, 2014, p. 103-122. https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2014-2-page-103.htm [archive]
Sandra Evers, Constructing history, culture and inequality : the Betsileo in the extreme southern highlands of Madagascar, Brill, Leiden, 2002, 241 p. (ISBN 90-04-12460-8)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Betsileo&oldid=1044534"
Dernière modification le 4 Aprily 2022, à 08:43
Voaova farany tamin'ny 4 Aprily 2022 amin'ny 08:43 ity pejy ity.